SME | Productivity Improvement for MSMEs Course: (Batch-2)Online သင်တန်:
Productivity Improvement for MSMEs Course: (Batch-2)Online သင်တန်:
>>စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် "Productivity Improvement for MSMEs Course: (Batch-2)Online သင်တန်းသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
COVID -19 ကာလအတွင်းမှာ လုပ်ငန်းအများစုက ဝင်ငွေများ ကျဆင်း ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်
လုပ်ငန်းတွေရေရှည် ရပ်ဆိုင်း၊ကျဆင်းနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတွေကို ပြန်လည်လည်ပတ်မှုကိုလည်း မဖြစ်မနေ စတင်လုပ်ကိုင်ရပါတော့မယ်
လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည် လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ မိမိလုပ်ငန်းကို နဂိုမူလထက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတွေတိုးတက်အောင် မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်
သာမန်အခြေအနေနဲ့မတူတဲ့အချိန် ,ပုံမှန်မဟုတ် သည့်အချိန်တစ်ခုမှာ Management Role ယူထားသည့်သူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား (productivity) တိုးတက်အောင် ဘယ်လို နည်းစနစ်တွေကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမှာလဲ ဒါဆိုရင်တော့
Japan နိုင်ငံ ၏ Kaizen နည်းစနစ်တွေမှ “ Productivity improvement online training ” သင်တန်းကို တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
1. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားဆိုတာဘာလဲ(What is Productivity )
3. 5s ,Visual Management ,
4. Suggestion system ,
6. Waste Elimination နှင့်
7. Quality Control ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းစေနိုင်မည်နည်းလမ်းများကို Group work ,Exercise များဖြင့်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်
• Zoom application တစ်ခါမှ မသုံးဘူးသေးသူများအတွက်လဲ သင်တန်းမစတင်ခင် အသုံးပြုတတ်အောင် သင်ပေးသွားပါမည်။
ILO SIYB Certified
UNIDO Certified Trainer
MPC Kaizen Consultant
Covid -19 Safety for SMEs Trainer
Registration fee : ၁၂၀၀၀ ကျပ်/ person (သင်ကြားရန်လိုအပ်သည့် facilitiesများအတွက်)
>>သင်တန်းပြီးမြောက်ပါက SME ဌာန အသိအမှတ်ပြု Electronic - Certification ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းတက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်ရန်
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း − (၀၉−၇၉၈၂၉၀၈၀၂)
KBZ pay & Wave Money - (၀၉−၅၁၄၂၉၁၂)
သို့ ဆက်သွယ်၍ Registration fee ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။)
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်- ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂,၁၃,၁၄)ရက်
ကျင်းပမည့်အချိန်-ညနေ ၅း၃၀ နာရီမှ ၈း၃၀ အထိ။
ကျင်းပမည့် Platform- Online Zoom Meeting
>>>လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖြစ်နေသည့်ပြဿနာကိုအဖြေရှာသောနည်းလမ်းများနှင့်အလေအလွင့်လျော့ချသောနည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်ရန်အဓိက အခြေခံလိုအပ်ချက် 5s အကြောင်းအရာများကို လေ့လာ သိရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိလုပ်ငန်း productivity တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုငိမည့် အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
>>>ဒီသင်တန်း ဟာလေ့လာမှုအတွက်သာမကပဲ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း productivity တိုးတက်ရန်အတွက် မလိုလားအပ်သည့် အလေအလွင့်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးဝင်ငွေတိုးနိုင်စေည့်အကြောင်းအရာများကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်း များ ၊ success stories များပါဝင်မှာဖြစ်သည့်အတွက် မိမိလုပ်ငန်းအတွက်အမှန်တကယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်သည့် အစီအစဉ်များကို လည်းသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကို တက်ရောက်မည့်သူများအနေဖြင့် အောက်မှာဖော်ပြထားပါသော Link ကိုနိပ်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ တက်ရောက်မည့်သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်သတ် ထားပါသည်။